SAWIRRO:-Wasiir Goodax oo kormeeray halka ay ka socoto diyaarinta natiijada Imtixaanaadka - Nabad iyo Nolol
SAWIRRO:-Wasiir Goodax oo kormeeray halka ay ka socoto diyaarinta natiijada Imtixaanaadka
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare Mudane, Cabdullaahi Goodax Barre ,ayaa Maanta kormeer ku tagay xarunta ay ka socoto shaqada imtixaankii Wasaaradda waxbarashada ay qaadday Sannad Dugsiyeedka 2018/2019 oo shaqaalaha wasaaraddu ay ku howlanyihiin dardargelinta dhameystirka xareynta xogta imtixaanka la saxay.
Wasiirka Waxbarashada , Cabdullaahi Goodax Barre ayaa Agaasimaha Xafiiska Imtixaanaadka iyo Shahaadooyinka ee wasaaradda ka dhageystay warbixin ku aadan halka uu marayo dhameystirka howlaha imtixaanka.
Sidoo kale Wasiirka Waxbarashada ayaa mid mid u dul istaagay shaqaalaha qaabilsan dhameystirka Imtixaanka waxa uuna ka wareystay habka uu u socdo howlaha imtixaanka.
“Waxaan maanta kormeeray xarunta ay ka socoto shaqada imtixaankii la qaaday ee sannad dugsiyeedka 2018/2019 oo ay shaqaalaha wasaaraddu si habsami leh u wadaan dardargelinta shaqadii loo idmaday.
The post SAWIRRO:-Wasiir Goodax oo kormeeray halka ay ka socoto diyaarinta natiijada Imtixaanaadka appeared first on Allgalgaduud.Com.
DAAWO:-Shirka Golaha Wasiirada Puntland oo looga hadlay qodobo muhiim ah